Plant and Grow Bamboo in Rice field - We Love Myanmar
Plant and Grow Bamboo in Rice field
Posted on August 13, 2017 August 30, 2017 by We Love Myanmar
၁၂ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၇ မှာ ဒေါ်လီဗီဆပ်နိုင်ထန်း၏ လယ်ရှိရာ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြောင်းတကာကျေးရွာ၇ှိ ၂၅ ဧကအတွင်း တချို့နေရာတွင် စပါးစိုက်ထားရာ လယ်ကန်သင်းရိုးမှာ ၀ါးပင်များကို စွန့်ဦးသူအဖြစ် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပါက ဝါးတစ်ရုံမှာ ၁၀ပင်ပဲမွေးပြီး မျှစ်နဲ့နှီးလည်းထုတ်မှာဆိုတော့ နေ့စဉ်အလုပ်နဲ့ဝင်ငွေရမှာပါ။ လယ်အရိပ်မကျပဲ နောက်ထပ်ငွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ဦးသူအောင်မြင်ရင် နောက်ကလိုက်ပါမယ်။ မအောင်မြင်ရင်လဲသင်ခန်းစာယူပါမယ်။ ဒီလိုစိုက်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်လို မြန်မာနိုင်ငံ ၀ါးစိုက်ပျိုးသူများအသင်း ဥက္ကဌ ဦးဝင်းကျော်ဦးမှ ပြောပါတယ်။
လယ်ကန်သင်းရိုးမှာ ၀ါးပင်စိုက်ဖို့ ၀ါးပင်ပျိုးသူ ဦးခင်မောင်လှမှ စာတမ်းရေးထားရာ ဂျာနယ်များမှာလဲ ဖေါ်ပြထားကြပြီး ဖြစ်ပါတယ် သို့ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ လယ်ကန်သင်းရိုးမှာ ၀ါးစိုက်ပျိုးသူ မရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဒေါ်လီဗီဆပ်နိုင်ထန်းရဲ့ လယ်ကန်သင်းရိုးမှာ ဦးခင်မောင်လှ ကိုယ်တိုင် မေတ္တာဖြင့် လက်ရောက် စိုက်ပျိုးပေးသွားပါတယ်။
(ကျမကတော့ လယ်ထဲမှာ ကျွတ်တွယ်မှာ ကြောက်လို့ ၀ါးပင် ၂ ပင် စီလောက် လယ်ကွက်နားထိ ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်)
John Thanga Galaxy Star 2017
519 thoughts on “Plant and Grow Bamboo in Rice field”
Mg Thu Myint says:
Lalfakzuala Bochung says:
ဖြူလွှလွှ စံ ပယ် says:
Shwe Htay Tin says:
Thein Soe says:
Salai Yoe Mg says:
Ma Naw says:
Mya Mya Win says:
လေးစား ပါတယ် ညီမရေ..
ဆရာ ဦးခင်လှအောင် ပါ။
Myint Zaw says:
ရောက်နေတယ် ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြန်ထွက်တော့မယ်လေ
Phawe Phawe says:
မျိုး သိန်း says:
အများအကျိုးပြုစိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝပြီး လက်တွေ့အမှန် ဆောင်ရွက်နေသူမို့ ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဗျာ ။
Min Si Thu Kyaw says:
သတင်းစာမှာလစဉ်​သမီး​လေး ဧမာ​နွေလကြာအိုင်​လင်း အတွတ်​ဆု​တောင်း​လေး​တွေဖတ်​ပြီးလူမမြင်​ဘူးပဲစိတ်​ထဲကခင်​​နေတဲ့အမ ကျန်းမာ​ပျော်​ရွှင်​ပါ​စေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေရှင်
Pan Thit Sar says:
အများအကျိုးပြုလို့ အောင်မြင်ပါစေရှင် .
Su Myat PanPan says:
ဟုတ်ကဲ့ပါ စိတ်ကူးနေတယ် ကျေးကျေးပါ
Thet Thet Khing says:
Winn Kyaw Oo says:
ပံ့ပိုးမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင် လေးစားရပါသည်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က စပွင့်ပါပြီ ကောင်းတဲ့အပင်တွေတော့ လမ်းချဲ့ရင်း ပါသွားတယ်။ ရှိပါစေတော့ မပြောချင်ဘူး မေ့ထားချင်ပါတယ်။
Thuzar Tin says:
မြန်မာပြည်ကိုချစ်သော တိုးတက်စေချင်သော ညီမ အစစအရာရာအောင်မြင်ပါစေ
Richard Nun Piang says:
Thant Maung says:
ဝါယား ​​ဇျေး​ကောင်းပါ၏
အိမ်​ရှင်​မ​တွေအတွက်​က​တော့ မြို့​ပေါ်မယ်​အဝန်​တန်း​ပေါ့ 
ကျမတော့ ဝါဘိုးဝါး စိုက်ပါတယ်ရှင်
Mg Mg Gyi says:
You want grow up
Need to organic soil
Nang Thaingi Yin says:
May Clare says:
ဟုတ်ကဲ့ မသူဇာ. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေရှင်
Nyein Nyein Soe says:
Daw Nan Taung says:
Moe Pwint Khay Mar says:
Lucky Sky says:
Sayar Gyi says:
ဝါးပင်က ရေငန်ရင်မဖြစ်ဘူးလားဗျ ပြောပြပေးပါ
ရေငန်ရင်လဲ မဖြစ်ဘူး၊ ရေ၀ပ်ရင်လဲ မဖြစ်ဘူး
Seng Wint says:
Karm Seven says:
စိတ်စေတနာကောင်းတဲ့ အစ်မ … အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Yacob Abdullah says:
Thi Da says:
David Lwin says:
Win Aung says:
အောင်မြင် မှာပါ အရိပ်ကျ ပေမဲ့ အရွက်က မြေသြဇာ ပြန်ရ မယ် သဲမှုန်တိုင်း ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်မယ်
Thomas Salai Thawmte says:
Salai Van Mar Thang says:
Nwe Ni says:
ဝါးရေ (banboo water) လဲဆေးဘက်ဝင်တယ်တဲ့ ဒီမှာတော့ ရောင်းတာမတွေ့ဘူးသေးဘူး
Na mawi tuk law law
ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ညီမ ။အစစ အဆင် ပြေ အေးချမ်းပါစေ ။
Mar Lar Ngun Hue says:
လောကရဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကအဖဘုရားနဲ့တူညီတဲ့အမနှလုံးသားကိုလှဲချခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းလက်တွေ့မြင်နေရလို့ဝိညည်ရေးရာစံပြအဖြစ်လဲအတုယူလျက်ရှိပါတယ်ဒဏ်ရာဗလပွနဲ့မြန်မာပြည်အတွက်တတ်နိုင်သလောက်မေတ္တာပြနေတဲ့အတွက်လဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် I Love Myanmar ဆိုတာကိုအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲအလုပ်နဲ့သက်သေပြနေတဲ့အမကို We love you too လို့ပြောဖို့ကလွဲလို့ဘာမျှမရှိပါဘူးနောက်တခုကတော့
God bless you and His favour upon you always naw sister.
Mg Yin Aye says:
အကျိုးများစွာ ပြု
ဝါးအခု ပေါ့
Lele Mar says:
Kee Awi says:
Ahnaing Mae Nwe says:
Poe Dar says:
ဦး ပို says:
Myint U Maung says:
ဝါး နဲ့ စပါး အတူပွား
လူသား သူဌေးဖြစ် ။
U Sai Shwe Tun says:
We also love ,our Environment Green !
Htun July July says:
Mi Mi Khaing says:
အမေ့ ရင် ခွင် says:
မမ levi ရဲ့reply လေးသိပ်ကြိုက်ထှာ
Thandar Thandar says:
ညီမလေးကတော်တယ် ထက်မြက်တယ် လောကကောင်းကျိုးပြုနိုင်သူလေးကိုလောကကြီးကချစ်ခင်နေမှာပါ
U Aye Lwin says:
စပါးပင် အရိပ်ကျပြီး အထွက်ထိနိုင်မလား။
၀ါးပင်ကြီးလာရင်လဲ သစ်ပင်လို အဖျားမှာ အကိုင်းအခက်မထွက်လာတော့ အရိပ်သိပ်မထွက်ပါဘူး
Daw Khin Khin Nyein says:
Langle Ai says:
Aye Aye Sann says:
နောက်ပြီး I LOVE MYANMAR
ဆိုတာကြောင့်လဲပိုစိတ်ဝင်စားမိပြီး see first လုပ်ထားတာ,.
အို ချစ်လိုက်တာ… ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်
Htet Htet Myo Htet says:
U Cho Ko says:
Mamahli Sky says:
Earthlingmud Earthling Heaven says:
Uka Lay says:
ThinThin Wai says:
Phyo Su Su Swe says:
Ko Ko Ko Ko says:
Hla Hla Nwe says:
Ĥlâ Ýèê Ñï says:
ဧမာနွေလ ကြာအိုင်လင်းရဲ့ မာမားပေါ့ ချစ်စရာကောင်းတယ်
Ma Ma Moe says:
ဧမာနွေလ ကြာအိုင်လင်းလေးကိုတခါမှမမြင်ဘူးလို့သူပုံလေး ကြည့်ချင်တယ်
Thidar Lwin says:
Aung San Lwin says:
​မြောင်းတကာ​ကျေးရွာနားမှာ ကျွန်း​တော်​ကြီးဆိုတာ ရှိပါတယ်​ ကျွန်​​တော်​​ရောက်​ဖူးပါတယ်​ ​မြောင်းတကာ စက်​မူ့ဇုန်​ဆိုပြီးတည်​လိုက်​​တော့ လယ်​​မြေ​ကောင်း​တွေ ဧက ရာနဲ့ချီပြီး သိမ်းခံရတာ နှ​မြော စရာပါ အဲဒီဖက်​​တွေက ​မြေသိပ်​မ​ကောင်း​တော့ စပါးအထွက်​မ​ကောင်းပါ ​မြေ​ကောင်း​အောင်​ ပြင်​နိုင်​လျင်​ ပိုမို​ကောင်းမွန်​ပါလိမ့်​မည်​။
ဟုတ်ကဲ့ …. စက်မှုဇုန်ကတော့ စက်ရုံတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီ ခြံကတော့ စက်မှုဇုန်နဲ့ ၁ မိုင်အကွာမှာ ရှိပါတယ်။ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် လယ်ယာမြေအဖြစ် အသုံးပြုလာတာမို့ မြေကောင်းပါတယ်။
Minn Lwin says:
Mya Mya Thin says:
Khin Oo says:
yes I Love Myanmar
Thidar Thein says:
Tin Tin Kyu says:
Myimyo Tun says:
စိမ်းလန်းစိုပြေ ရတနာမြေ says:
Nan Khin Mar Swe says:
စိတ်ကူးကောင်းတယ် အောင်မြင်ပါစေသမီး ရေ 🙂 🙂
Mai Nleeng Kee says:
Asenath Khan Pi says:
ဝါးစိုက်ရင်အဲဒီမြေက ဝါးမြစ်ကြောင့် တခြား ဘာမှ စိုက်မကောင်းတော့ပါ
Khawnchat Kachin says:
Nu Bawi says:
Sawmi Fanai says:
Ka chhuang lutuk che
Tin Maung Maung says:
သိပ်ကောင်းတဲ့စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး အစီအစဉ်ပါ I Love Myanma ။
သိပ်ကောင်းတဲ့စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး အစီအစဉ်ပါ I Love Myanmar ။
Mgaye Mgaye Mgaye says:
Ko Naing says:
အစမ်း သပ်ခံ မြန်မာပြည်
Nunu Yin says:
Van Lal Remsiam says:
Khin Cho Khaing says:
သမီးလေး က ဒီခြံထဲမှာ မြှပ်နှံ တာလားရှင်။
She get everlasting life now.
ဘုရားအကြံအစည် တွေ ခုနောက်ပိုင်း
GOD BLESS YOU MORE TO GOD BE THE GLORY.
Dawt Iang Hlawnching says:
Ngwe Kyi says:
Ohn Mar Nyo says:
ရဲမင်း မင်္ဂလာဆိုင်း says:
Julio Swe Latt says:
ဧမာ​နွေလ နူး​ ​အောင်​မြင်​ပါ​စေရှင်​
Hlaing Win Pe says:
သစ် ဝါးရှားတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရလို့ပါ။
ဝါးပင်​ကြီးလာရင်​ ကိုင်းလာပြီး ​လေတိုက်​ရင်​​တော့ စပါးပင်​​တွေကို တံမြက်​စည်းလှည်းသလို လဲ​စေပါတယ်​
ဝါးပင်​​လောင်းကျတဲ့ စပါးဟာ အပင်​သန်​ရင်​​တောင်​ အသီး အပါတယ်​
အပင်​​ခြေ နဲ့ အပင်​​ပေါ်မှာ ကြွက်​များ​နေတတ်​ပါတယ်​
U Win Oo says:
စိုက်ဘူးပါတယ် စပါးအပင်ကောင်းပြိး အသီးမကောင်းပါ များလျှင်စပါးအထွက်နဲနှိူင်ပါတယ်
Hma Ngaih says:
TiBual nu na mawi law law si
Winag Htwe says:
၀ါးပင်က ရေ၀ပ်တဲ့နေရာ စပါးပင်ကြားမှာ မပေါက်နိုင်ပါဘူးရှင့်
U Aung San Win says:
လယ်​ကန်​သင်းကျယ်​ရင်​ဖြစ်​မှာပါ ၊ဝါးပင်​နဲ့လယ်​ကို စိမ့်​​မြောင်းသ​ဘောမျိုးခြားထား​ပေးရင်​ပို​ကောင်း
မယ်​လို့ထင်​တယ်​ ၊ ဝါးမြစ်​​တွေထိုး​တော့ ​ကန်​သင်း
မလုံဖြစ်​ပြီး​ ​ရေခနခဏမတင်​ရတာ​ပေါ့ ။
Yar Yar Yarma says:
Shwe Minthar Shwe Minthar says:
ဘာဝါးမျိုးပါလိမ့်
Han Soe says:
Nancy Rosair says:
Eiei Khin says:
Pyone Lay says:
Aunti Mumu says:
Ma May says:
Thulei Hpow says:
ဝါးစိုက်တာဝါသနာပါရင်တစိုက်မတ်မတ်သာစိုက်ပါ…ဝါးရိပ်ကစပါးထည့်တွက်မနေပါနဲ့မြေလူးပြီမြေသြဇာတော့တိုးမှာသေခြာသလို ကနေ့၉၆ရောဂါကိုပျောက်စေနိုင်သည့်ဝါးမှထုတ်ယူရရှိသည့် ဝါးရေကြည်ကစွမ်းနေပါ၏
KoKo Kyaw says:
Joshua ThangTin L Hnin says:
ဆလိမ် ဆရာ says:
Hlahtay Myint says:
Myint Oo Kyaing says:
ဝါးပင်က ကြွေတဲ့အရွက်က လယ်အတွက် မြေသြဇာ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်
Falam HreTe says:
poi ve 😀 Lungawi thotho cumi tiang in ruatsak ih 🙂
U Khin Tint says:
Nilar Than says:
Khin Maung Oo says:
John Lann Ralte says:
Kyaw Win Win says:
Dawsansan Maw says:
Phoe Toke says:
ဓါးမဦးဆိုက် လယ်ယာမြေ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း
ဘုရားလည်းဖူး လိပ်ဥလည်းတူး ညောင်မြစ်တော့ မပေါ်ပါစေနဲ့ဟု တောင်းဆုချွေအပ်ပါသည်။
Aye Kyaw says:
အင် ကြင်း says:
ဧမာနွေလ ကြာအိုင်လင်းရဲ့ အမေလား
ဟုတ်ပါတယ်ရှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေရှင်
Pyittsoann Nyinyi says:
နောင် တွင် လယ်မဟုတ် ဥယျာဉ် ပေါ့
လယ်အဖြစ်ဘဲ ထားချင်ပါတယ်။ စပါးစိုက်ထားတော့ စိမ်းနေတာ လှလို့ပါ
THit KHat Nyein says:
သတင်းစာထဲမှာ လစဉ်​မပျက်​ နာမည်​​လေး​တွေမြင်​​နေရတဲ့ မိသားစု​လေးထဲက ​မေ​မေကို ခုမှမြင်​ဖူး​တော့တယ်​
ငါးမျှားတန်ဝါးစိုက်ရင် ဂျပန်ပို့ကုန်လုပ်လို့ရတယ်၊ ဒီအောက်အရပ်မှာနေရာတကာ ဝါးပိုး ကျသောင်း ဝါးနက် စတဲ့ဝါးပင်ကြီးတွေနေရာတကာပေါက်တယ်၊ မြှစ်လည်းပို့ကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဝါးနဲ့လူ့အသုံးအဆောင်အလှအပတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်၊
ဒါနဲ့စကားမစပ် fb မှာမိုက်ရိုင်းတဲ့ သီချင်းဆိုတဲ့သူနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်၊ ဝေးဝေးရှောင်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်၊
Thi Tar Win says:
သမီးငယ်လေးဧမာနွေလကြာအိုင်လင်း အတွက်ဆုတောင်းတဲ့စာလေးတွေကိုမကြာခဏဖြတ်ခဲ့ဖူးတယ် လွမ်းတဲ့စိတ်ကိုအမျးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစားထိုးလုပ်ဆောင်နေတာဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်
မမကိုစိတ်​ဝင်​စား​နေတာကြာပါပြီသမီး​လေးလွမ်းဆွတ်​ခြင်း​တွေ​တွေ့ကထဲကပါဂုဏ်​ယူပါတယ်​​မှော်​ဘီသားတစ်​​ယောက်​အ​နေနဲ့I Love You
thank you, I love you too
Alto Sein says:
God bless your job.
Saysay Wah says:
Sawmon Hla says:
ဗမာ့ သွေး says:
ကြားဘူးလား ရောက်ဖတရာ ဝါးတရာ မစိုက်ကြဘဲ သုံးတော့ ဆုံးတာပေါ့စိုက်ပြိုးပြီးသုံးကြတော့အချီးနှီးမဖြစ်ဘူးဝါးတရုံလုံးကုန်သွားပြီ သုံးတဲ့သူတေကတော့တရောက်တလုံးဘဲသုံးရတယ် ဒီမှာက ဝါတရုံးပြောင်ပြီ စိုက်ကြပါ အားပေးတယ်
Sai Than says:
Slaiwathi Hmantungei says:
စောင့်ကြည့်လ်ိုက်ရင်နောင်တပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အမြစ်ကိုထွန်ရင်တော့ အပင်ညွှိုးမှာပါ်
Min Htike says:
အိုးဟိုး အလန်းကြီး ရှိသေးတယ်
San Maw says:
Zaw Min Aung
U Sai USai says:
ရ ပါ စေ–
Htay Myint says:
ဝါးစိုက်ချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ရိုးရာနည်းနဲ့စိုက်ရင် မျိုးပင်လုံလုံလောက်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူး
မိုးထက်အာကာ ရာဇာ ငြိမ်းချမ်း says:
Badshah Zaib Kakadwal says:
stop killing muslims in burma#
Badshah Zaib Khan says:
Lisu Amber says:
Thanmyintoo Thanmyintoo says:
မျိုး​စေ့ ဘယ်​လိုဝယ်​ ရင်​ ရမလဲဗျာ
Daw Thida says:
Lwin Lwin Aye says:
Benefits of wearingaseat belt
Attending international conference in Melbourne Australia
The memorial stone commemorates the centenary of the Sim Revolution against the British Empire
The Voice of Muslim in Myanmar (English and Burmese version)
Minn Paing on Attending international conference in Melbourne Australia
U Mg Gyi on Attending international conference in Melbourne Australia
Zaw Zaw Latt on Attending international conference in Melbourne Australia
Levi Sap Nei Thang on Attending international conference in Melbourne Australia
Shop No. 62, West Wing (C)
About We Love Myanmar